Banaanbax looga soo horjeedo Xasan Sheekh iyo colaada Gaalkacyo oo ka socda Garoowe (DHAGEYSO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Banaanbax looga soo horjeedo Xasan Sheekh iyo colaada Gaalkacyo oo ka socda Garoowe (DHAGEYSO)
Wararka haatan naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaaa sheegaya in goordhaw uu halkaasi ka bilawday banaanbax aad u balaaran oo looga soo horjeedo Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale colaadda ka jirta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Banaanbaxaan oo ay ka qeyb galayaan boqolaal qof oo ay ka mid yihiin mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Nugaal ayaa la sheegay in looga soo horjeedo dagaalada Gaalkacyo, iyadoona dhinaca kale eedeyn loogu jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal ee maamulka Puntland Cumar C/laahi Maxamed (Faraweyne) oo fagaare ku yaala magaalada Garoowe kula hadlay dadka kasoo qeyb-galay banaanbaxaasi ayaa sheegay in dagaalka magaalada Gaalkacyo ay wado dowladda federaalka Soomaaliya.
“Maamulka gacan ku sameyska ah ee la yiraahdo Galmudug oo kaashanaya Al-shabaab iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo weeraray magaalada Gaalkacyo, waana arrin nasiib darro ah” Sidaasi waxaa yiri gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Faraweyne.
Dhinaca kale, Cumar Faraweyne ayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inuu dagaalka Gaalkacyo door weyn ku leeyahay islamarkaana uu ka shaqeeynayo sidii uu colaada magaaladaasi usii hurin lahaa.
“Musuq-maasuqa iyo dhibaatooyinka dalka ka taagan waxaa mas’uul ka ah Xasan Sheekh oo haatan madaxweynaha Soomaaliya ah, waana arrin nasiib darro ah in madaxweyne Qaran uu ku lug yeesho arrinkaas” Ayuu hadalkiisa ku daray gudoomiyaha gobolka Nugaal ee Puntland Cumar C/laahi Maxamed Faraweyne.
Si kastaba ha ahaatee, banaanbaxa haatan ka soconaaya magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay ay degmada Qandala muddo saacado ah la wareegeen koox ka tirsan Daacishta gacanka Soomaaliya ee uu hogaaminayay Sheekh C/qaadir Muumin.